guriga / Kiiska Macaamiisha
Sideen ugu guuleysan karnaa inaan helno qandaraas BMW ah?
Sannadkii hore waxa noo yimi shirkad wax ka soo dejisa waddanka Boortaqiiska. Waxay ku tartamayeen olole xayeysiin ah BMW Portugal. Waxay doorteen afar alaab-qeybiyeyaal si ay uga caawiyaan inay dalabka sameeyaan. Waxaan ka mid ahayn. Macaamiisha ga ...
Sideen ugu aamin karnaa sambabka Aqua Lung?
Sambabka Aqua Lung waa sumadda ugu sareysa ee qalabka quusitaanka, koox caalami ah oo leh laamo u gaar ah adduunka oo dhan. Bacaha waa alaabada qalabkooda, waagii hore, mid kasta oo gacansaar la leh naqshadeynta iyo pu ...
Sideen ugu caawin karnaa PAKAMA inay horumariyaan sumadooda?
PAKAMA waa nooc ku cusub isboortiga dalka Jarmalka, oo ay abuureen labo dhalinyaro ah. Waxay u heellan tahay inay ka caawiso dadka inay sameeyaan isboorti meel kasta oo ay rabaan, iyadoo samaysa boorsooyin qaab nololeed fudud oo leh traini buuxa ...
Iskaashiga muddada-dheer ee u dhexeeya Monkking iyo RiutBag
Sannadkii 2014, macmiil ku nool England, waxay qaadatay fikradeeda, buuggeeda sawir gacmeedka ah waxayna uga tagtay Bangigeeda shaqo joogto ah si ay u sameyso fikrad dhab ah Laptop Backpack Reality. Waxaa soobandhigay saaxiibkeed, waxay caan ku ahayd Warshadda Monkking, ee ...
Sheekada wada shaqeynta RISE.
RISE waxaa aasaasay laba walaalo ah oo aad u jecel safarka inta lagu gudajiray kuliyadoodii sanadkii 2012. Hadafkooda nololeed wuxuu ahaa inay bixiyaan alaab aad u fiican oo ka caawisa dadka inta badan safraya d ...